ဖြည့်စွက်ပြောချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ » နှင်းနုလွင်
သတိ ရှေ့နားတွင် မြို့တစ်မြို့ ရှိသည်
အမေနေ့၊ အမေ့စာ၊ အမေတို့ အတွက် ကဗျာ
* ကြည့်ကျက်လုပ် *
ဖားလေး ၂ ကောင်
« ဘ၀ကို နှုတ်တိုက်ရွတ်ခြင်း (သို့) အယ်နာ
* * မိုး ည နေ * * »
ဖြည့်စွက်ပြောချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့	Categories: ကဗျာများ
by နှင်းနုလွင်	August 1, 2013	တကယ်တော့
လူရှေ့သူရှေ့ ဟန်ပန်တကျ ကောက်တတ်လိုက်လို့ရတဲ့
အားလုံးနဲ့ ဖစ်တင်းကျမယ့် ရှန်သားချည်ကလေးမဟုတ်မှန်း
လူအားလုံး နှစ်ခြိုက်လက်ခံကြတဲ့ ဖက်ရှင်ဆန်းမဟုတ်မှန်း
ကိုယ်ခရေဇီဖြစ်လွန်းလို့ ဝယ်ထားတဲ့ Brand တခုမဟုတ်မှန်း သိပ်သိတာပေါ့
စိတ်လိုလက်ရ ဝတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း အဆင်ပြေသွားတတ်တဲ့ ဂျင်းပန်လေးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို ဖွပ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း ဖြူဖွေးသွားစေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
အဖြိုအဖျက်ကို တားဆီးပေးမယ့် ယတြာကလေးလို
ကိုယ်သုံးနေကြ အစိမ်းရောင် တမျိုးမဟုတ် တမျိုးလို
မအားမလပ်ခြင်း နဲ့ ကိုယ်
၂၀၊ ၀၈၊ ၂၀၁၂
PDF အဖြစ် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမယ်
Permanent link to this article: http://hninnulwin.com/archives/2370
Website:5+ seven = Message: *
အကြီးအကဲဝတ် (၆) ပါး	ထ ကြွ၊ နိုး ကြား၊
သ နား၊ သည်း ခံ
ဝေ ဖန်၊ ထောက် ရှု
ဤ ခြောက် ခု
ကြီး သူ ကျင့် ၀တ် တာ။
Recent Posts	အံ့ဘွယ် မိန်းမသား . . (၃)
အံ့ဘွယ် မိန်းမသား . . (၂)
“အဘယ၊ ၀ိပါက၊ ဂုဏ”
လိုချင်တာတွေ ပေါတဲ့မြေမှာ မလိုချင်ဘဲ ရခဲ့တာတွေနဲ့တကွ
မာယာတွေ မောင်းတဲ့ခရီး »
Recent Commentsyadanar on လရိပ်အောက်က ခရီးရှည်များreader on လရိပ်အောက်က ခရီးရှည်များjasmine on စိတ်ကြည့်မှန်လေး မအက်စေချင်မြသွေးနီ on ကြွက်စစ်ဆင်ရေး၏ နောက်ကွယ်win phyu than on ကြုံတိုင်းရွာ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ဆိုသည်မှာနှင်းနုလွင် on “﻿တကယ်ကောင်းတဲ့ဆေးဖြစ်အောင်”thelay ni ni on “﻿တကယ်ကောင်းတဲ့ဆေးဖြစ်အောင်”မောင်ဘကြိုင် on အကယ်၍Toee Myint on ရိုးရှင်းသော ဘ၀အဖော်သိ င်္ဂါရ on ဒီကဗျာကို နားလည်မှုလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မယ်
*ဇ* (2,138)တခုခုဆိုရင် ညီမလေး မသိဘူး (1,816)တိမ်ညွှန့်စားတဲ့ စုန်း (1,491)အဆီကျဆေးများ (1,428)အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူခြင်း (965)ဗိုက်ထဲက အဆီ (928)ရိုးရှင်းသော ဘ၀အဖော် (924)နှလုံးသားများ မနွမ်းစေချင်ပါ (909)ရေကိုစည်းခြား…အကြားမထင် (845)အစာအိမ်ရောဂါပျောက်ဆေးများ (828)“ လှုပ်ခတ်နေသောကုန်ကြမ်း” (782)မှိုသတ်ဆေးများ (723)*အကောင်းတစ်ကွက်ရှိပေမယ့် အရှည်သဖြင့်တော့ ပေါင်းဖက်ရန်မလွယ်* (707)ချစ်သင့်တာကို ….မွန်မြတ်စွာနဲ့ ……..ချစ်တတ်ခဲ့ပါပြီ။ (652)အမေများနေ့၊ အမေရေးသောစာ၊ အမေတို့အတွက် ရေးတဲ့ကဗျာ (640)
ဒီဆောင်းပါးကို PDF အဖြစ်ပို့မယ်
© 2015 နှင်းနုလွင်. Return to top
Powered by WordPress and the Graphene Theme. This site is protected with Urban Giraffe's plugin 'HTML Purified' and Edward Z. Yang's . 7026 items have been purified.testshow current page